संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सोध्नुस्,प्रधानमन्त्री पनि कानुनअनुसार चल्नुपर्यो नि ।
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ २० बुधबार |
प्रदेश २ सरकारको बिदाको अवज्ञा गरेको भन्दै जनकपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव धर्ना दिन पुगे । मन्त्री नै धर्नामा उत्रिएपछि चर्चा र विरोध दुवै भयो । भदौ १० गते जनैपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनको उपलक्ष्यमा प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा राष्ट्र बैंकले पालना नगरेपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मन्त्री यादव स्वयंले तालाबन्दीसमेत गरे । मन्त्री नै धर्नामा बस्नपर्ने अवस्था किन आयो ? समस्या के हो त ? प्रदेश २ को अवस्था र केन्द्र सरकारको सहयोगबारे नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
-लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश २
प्रदेश २ का मन्त्रीहरु काम गर्न छाडेर धर्ना बस्न थाले । किन ?
धर्ना बस्नै पर्ने स्थिती आयो । प्रदेश सरकारले विदा दिइसकेपछि सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ । तर अटेरी गरेर कार्यालय खुलाएपछि प्रदेश सरकारको औचित्य भएन नि ।
तर केन्द्रले कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएपछि कसरी बन्द गर्ने ?
प्रदेश सरकारले विदा दिइसकेपछि केन्द्रले किन हस्तक्षेप गर्ने ? प्रदेश सरकार भनेको प्राधिकरण र विभाग जस्तो त हैन नि । प्रदेश सरकारले सुचना जारी गरेपछि सबैले मान्नुपर्यो नि । यो त कानुनअनुसार चल्नुपर्ने कुरा हो नि ।
तर केन्द्र सरकारसँग समन्वय नगरी मन्त्रीलाई नै धर्नामा बस्न पठाउनुपर्ने त थिएन नि ।
कानुन माथि हो कि यो देशको प्रधानमन्त्री माथि हो ? प्रधानमन्त्री पनि कानुनअनुसार चल्नुपर्यो नि ?
तपाई आफैँ संविधानभन्दा माथि जान खोजेको जस्तो देखियो नि ?
तपाई चाहिने नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ । तपाई पत्रकार हो, कानुन पनि पढ्नुस् । म संविधान र कानुनअनुसार काम गरिरहेको छु । प्रदेश सरकारले विदा दिएपछि त्यो प्रदेशका सबै कार्यालयले पालना गर्नुपर्छ भन्ने त कानुनमै छ नि ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीले धर्ना बस्नुपर्छ भन्ने कुन कानुनमा छ ?
यस्तो तरिका हो भने मन्त्री धर्ना बस्ने मात्रै होइन, हड्तालमै उत्रिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश २ को मन्त्रीपरिषदमा अभिराम शर्मा जस्ता अपराधीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई किन समावेश गर्नुभयो ?
अदालतले शर्मालाई सफाई दिइसकेको छ । अभियोग पत्र दायर हुँदैमा अपराधी भन्न त मिलेन नि । मधेश आन्दोलनका दोषीलाई पुरस्कार दिने अनि जनताको लागि लड्ने व्यक्तिलाई चाँही मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तपाईहरुले जनताको लागि काम गर्न नसक्ने अनि केन्द्र सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ त ?
हामीले दर्जनौँ राम्रो काम गरेका छाँै । प्रदेश सरकार संचालनका लागि कानुन बनाउँदै छौँ । बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान मुलुककै एक नम्बर कार्यक्रम भएको छ । अरु धेरै नीति र कार्यक्रम आएका छन्, जसलाई जनताले मन पराएका छन् ।
तर विकास निर्माण त हुन सकेन नि ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सोध्नुस्, प्रदेशमा किन पर्याप्त कर्मचारी पठाएका छैनन् । कर्मचारी नै नभएपछि विकास निर्माणको काम कसले गर्छ ? अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी छन् । खटाएका कर्मचारी पनि आएका छैनन् । कसले कारबाही गर्छ ? हामी त प्रदेश २ मा सबै काम गर्न तयार छौँ ।